Semalt Expertise: Firy ny nomeraon'ny nomerao ilainao?
Miezaka ny hanavao ny paikady ny tompona orinasa mba hijanonana mialohafifaninanana ary miaro ny marika. Amin'ny fampiroboroboana e-varotra, ny orinasa dia miankina amin'ireo tetika ireo ankehitriny. Misy fironana sasanyizay mieli-patrana amin'izao fotoana izao any an-tsena dia ireo tompon'ny tranonkala dia mividy ny dikan-teny rehetra momba ny nomena ny marika - ray ban espelhado blaze.
Fa firy ny anaran-danjany maro no tena mila manatsara ny fahitana anao sy miaro ny marikao? Ny manam-pahaizana lehiben'ny Semalt Digital Services, Max Bell dia manome valiny haingana amin'ity fanontaniana ity.
Ny fananana anaran'olona maromaro dia mety ho tombony na andraikitra. Mitana maromaroanarana nomena anarana ho tombon-tsoa ahafahanao miaro ireo anaran-desona mitovy amin'ny fampiasana ny mpifaninana aminao. Ao amin'ny sehatra SEO, ahafahanao koa ny mananaireo teny fanalahidy rehetra manintona. Na dia mety hahatonga anao hahazo tsimok'aretina an-tserasera izany tombontsoa izany aza, dia mety hisy ny trosa.
Koa satria hampiasa ny sehatr'asa rehetra misy anao, ny milina fikarohana dia mety hisarika azy ireo ho toy nyNy ezaky ny Spam dia miteraka sazy henjana, anisan'izany ny fanamarinana tsy mety. Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra ny manam-pahaizana SEO hanamafy ny raharaham-barotra rehetraanarana sy ny vohikala mifandraika amin'ny tranokala matanjaka. Izany dia mampiasa ny hery avy amin'ny anaran'ny sehatra tsirairay mba hamoronana iray anaran'ny sehatra matanjaka irayMahery tokoa ny mitana ambony indrindra amin'ny milina fikarohana ara-dalàna rehetra nefa tsy manimba ny laharana teo aloha. Ny fanamafisana dia mitaky ny fanangananaToro-hevitra maharitra 300 avy amin'ny sehatra avy amin'ny loharano ho an'ny sehatra voalohany, asa iray atao amin'ny sehatra manokana SEO na mpitantana tranonkala.
Ireo rohy avo lenta
Ny anarana nomena anarana rehetra dia manana ny rohy ambany amin'ny kalitaony indraindraynaverina nalefa, dia nampita tamin'ny toetra ambany ihany ireo vokatra ireo ka nahatonga ny endri-tsoratra ambany kokoa amin'ny milina fikarohana. Mba hiatrehana izany dia ampiasao Majestic naConsole Google Search hijerena sy hanesorana rohy ambany tsy tapaka alohan'ny fanodinana. Ny rakitra an-tsoratra dia asiana anarana misy ny rohy malemy ambanynavoaka tao amin'ny milina fikarohana mba hanafoanana ity olana ity.
Amin'ny ankapobeny, ireo anaran-dahatsoratra marobe anao dia manana ny fandaniana betsaka azonaomitentina amin'ny endriky ny saram-panavaozana isam-bolana. Ny anaran'ny sehatra tokana dia mandoa $ 10-35 isan-taona raha tsy misy ny faktiora amin'ny vidin'ny fikojakojana.Ampitomboy izany amin'ny anaran'ny nomerao anaranao ary ianao dia hijery amin'ny endrika sarobidy.
Fiarovana amin'ny alàlan'ny sehatra maro
Ny manam-pahaizana SEO dia nilaza fa azo atao ny fiarovana ny marika nefa tsy voatery hividyanarana nomena anarana maromaro. Ataovy ao an-tsaina fa ny fananana fanjakàna dia manaraka fitsipika hentitra sy voafaritra tsara. Ohatra, raha manana marika manokana ianaoanarana nomena anao, dia afaka manohitra sy mahazo indray ny sehatra ianao raha misy antoko iray hafa manoratra faritra hafa izay misy ny marika famantarana anao. MisyMaro ny mpampiasa nomeraon'ny nomerika sy manam-pahaizana avy any amin'ny fahalalana momba ny Politika Fanapahan-kevitra momba ny fanavakavaham-pitondram-panjakana mahazatra. Na izany aza, ity dingana ity dia afakaAza kivy fa miadana.
Makà fotoana amin'ny SEO fanao sy marika. Araka ny noresahina tetsy ambony, ny fananana maromaroanarana nomena anarana dia mety hahasoa mandritra ny fotoana fohy saingy sarotra mandritra ny fotoana lava. Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fahadisoana dia ny hifanaraka amin'ny traikefa manam-pahaizana SEO .